BAZARY TRANON-JIRO ANKIRIHIRY : Mpangarom-paosy roalahy saron’ny mpiambina tsena
Samy miezaka manatsara ny fomba fiasa avokoa ireo tsena misy ao Toamasina. Miroso amin’ny fanakaramana vatan- dehilahy matanjaka ny fikambanan’ny mpivarotra. 10 avril 2018
Tsy diso anjara tamin’izany ny ao Bazary tranon-jiro Ankirihiry. Nahatsapa mantsy ireo mpivarotra fa anisany sakana tsy mamparisika an’ireo mpanjifa hitsofoka any anaty Bazary Tranon-jiro ny fiainan’ny mpangarom-paosy ka ilaina ny fisian’ny mpiambina.
Ny antoandron’ny zoma 6 avrily lasa teo, dia mpangarom-paosy roalahy no voasambotry ny mpiambina ny tsena teo am-panaovana asa ratsy.
Niaiky ny heloka vitany izy roalahy ary nilaza fa efa ela no naha mpangarom-paosy azy ireo.
Misy kosa ny fiaraha-miasa eo amin’ny polisy sy ny mpiambina ny tsena mba tsy hisian’ny fitsaram-bahoaka. Vokany, na dia nisy aza ny fikasan’andian’olona hanao fitsaram-bahoaka, dia voasakan’ny mpivarotra sy mpiambina ny tsena izany. Nentina avy hatrany teny amin’ny biraon’ny polisy izy roalahy.
Momba izay fandraisana andraikitra manoloana ireo mpanao ratsy ireo izay hatrany, dia tovolahy kalaza amin’ny halatra moto no nifa nenjehan’ny polisy sy fokonolona ny sabotsy lasa teo. Sarona tao Tsarakofafa ilay tovolahy niaraka tamin’ilay moto nangalariny avy tao Ankirihiry.
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (661) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021